Akangwara Multi-basa Mota SY akateedzana akangwara multifunctional migwagwa yekugadzirisa mota dzakabatana dzakagadziridzwa neHebei Special Chinangwa Mota Kugadzira Co, Ltd. uye iyo Space Robhoti Yekutsvagira Kamuri yeyunivhesiti inozivikanwa muBeijing kwemakore matatu. Iyi mota inosanganisa mashandiro ehuchenjeri hwokugaya, kupora, jekiseni remafuta, kuzadza nekuumburuka kuita chimwe, izvo zvinogona nyore uye nemazvo kuona kugadzirisa nekugadzirisa mativi, kutenderera makomba uye manhole co ...
Kongiri Inosanganisa Chirimwa - CLS
CLS akateedzera Konkrete Kusanganisa Chidimbu CLS akateedzera Konkrete Kusanganisa Chirimwa inokodzera yemaguta yekutengesa yakatemerwa kongiri, migwagwa nemabhiriji, zvivakwa, mainjiniya emvura, simba remagetsi, madoko, nhandare uye mamwe makuru mapurojekiti ekuvaka. Iyo ine zviripo zviripo zvekugadzikana kwakanaka, kwakasimba mashandiro uye epamusoro ungwaru degree. Ca-refu kongiri yekusanganisa chirimwa chimiro dhizaini, zvine musoro, zvinhu zvakaomarara, inoshanda, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, sekureva kwe ...
Chidimbu Chekusanganisa Ivhu - CLW
CLW dzakateerana ivhu / simende inosanganisa chirimwa CLW dzakateerana ivhu / simende kusanganisa chirimwa chakanakira zvivakwa zvekuvaka mapurojekiti senge Expressway, mugwagwa nendege. Iyo ine zvinotevera maficha: akanaka anochinjika zvinhu, akawanda madosi, compact dhizaini uye inonzwisisika dhizaini, yakakwira kutendeseka, nezvimwewo Kugona kunobva ku350t / h kusvika ku600t / h. ■ Yakashongedzerwa neakakwira kuita kusanganisa sisitimu, yunifomu kusanganisa, kugadzikana kuita, kugona kwepamusoro kugadzira ■ Inogona kusanganisa mhando dzakasiyana dzeyakagadzikana ivhu musanganiswa ...
Towed Kongiri Pombi - CLT
Main maficha ■ Zviviri zvakateedzana zvigadzirwa zviripo: mota yemagetsi uye dhiziri mafuta mota. ■ Vepasirese vane mukurumbira pasi rese vanovimbisa kugadzikana uye kuvimbika yakakwira-yakadzika kumanikidza, inokodzera zvese zvakaderera-kuburitsa chivakwa chakakwira uye yakakwira-kunze ...
Kubvisa dongo zviwanikwa kudzokororazve chirimwa chakazara Kuputsa marara zviwanikwa marara akazara chirimwa, kunyanya chekuvaka mumadhorobha, matombo ekongiri akasimbiswa, kongiri yakajeka, zvidhinha nematiles, huni nezvimwe zvinogadzirwa nekuparadza dzimba zvakaputswa, zvakarongedzwa, kuongororwa, kongiri uye zvidhinha zvova zviyero pamwe nejecha, kugadzira kongiri kana kubheka-isina zvidhina, mapurasitiki, huni, ayoni zvakarongedzwa kuti zvishandiswezve, ziva marara kune zviwanikwa zviripo.
Crawler Mobile Crusher Crawler mhando izere nhare mbozha yekupwanya chiteshi inoiswa mukuvaka tsvina kurapwa, kugadzirwa kwematombo, kuchera uye mimwe minda. Nhare yekupwanya chiteshi inotora hunyanzvi uye inoshanduka dhizaini. Iyo yekupwanya chiteshi ine yayo yega jenareta, iyo inogona kuona iko nekukurumidza kufamba kweanoshanda saiti uye yakakodzera kune saiti mashandiro ekuvaka kuputsa. Iyo mota inotora kure kudzora, iyo inogona kuona kure oparesheni ■ Yepamberi yekupwanya muchina kumisikidza, stabl ...